Sida loo dejiyo jawaabo deg deg ah barta Instagram | Androidsis
Mid ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee ka soo cusbooneysii cusbooneysiinta 'Instagram' waa jawaabaha degdegga ah, hab lagu awoodo in si toos ah loogu jawaabo qof kasta. Tani waxay shaqeysaa haddii aan dooneyno xiriirada inay helaan jawaab marka ay noo qoraan qoraal, wax kastoo uu yahay.
Waxa ugu muhiimsani waa inaan uga baahan doonin wax dalab ah Play Store, waqtigan xaadirka ah mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee sida ugu dhakhsaha badan uga jawaabi kara waa "AutoResponder". Waxaa ugufiican in lawareejiyo jawaabaha degdega ah ee barta Instagram adoo adeegsanaya xoogaa talaabooyin ah isla markaana aad uga jawaabtid fariimahaas waxyar kadib.
Waxaa jira shaqooyin badan oo Messenger ah oo Instagram-ka hadda ka faa'iideysto, is-dhexgalka ayaa si weyn u soo hagaagey, wuxuu ku jihaysan yahay iibsiga iyo Reels si habboon ayey u ifaysaa. Isbedelada sidoo kale waxay ku yimaadaan Instagram Direct, mid ka mid ah qeybaha loogu diro fariimaha xiriirada.
Jawaabaha degdega ah si ay u yimaadaan, xisaab xirfad leh ayaa lagama maarmaan ahHaddii aadan firfircooneyn, waxaa fiican inaad sameyso kahor intaadan bilaabin. Waxba ku weydiin maayaan, sidaa darteed looma baahna inaad yeelato shirkad ama wax la mid ah si aad u doorato mid ka mid ah noocyada noocan ah, sidaa darteed waa muhiim in uusan ahayn xisaab caadi ah. Sidoo kale cusbooneysii barnaamijka.
Fur barnaamijka Instagram qalabkaaga Android
Soo gal xulashada "Farriimaha Tooska ah"
Fur wada hadalka koowaad ama labaad
Hada mar gudaha, guji + astaanta
Dhagsii saddexda dhibic ee sumadda
Ugu dambayntii, qor dariiq iyo fariin si otomaatig ah uga jawaabi doonta dhammaan xiriirada fariinta kuu soo dira.
Fariintu waa is-qaabeyn kartaa inta jeer ee aad rabto, waxaa ugufiican in la dhigo fariinta "halow, waan kaaga jawaabi doonaa markaan akhriyo fariinta, mahadsanid!" ama wax ka soo jeeda tan. Farriimaha tooska ah ee 'Instagram' 'waxay si fiican ugu shaqeeyaan sheekaysiga iyo dejinta halbeeggan waa muhiim.
Instagram ayaa oggol la wadaag sawiradaada adoo adeegsanaya xiriiriye, qari inaad internetka kujirtid, xannibo fariimaha tooska ah y dhaji faallooyin muhiim ah. Kuwani waa qaar ka mid ah waxyaabaha iyo shaqooyinka uu dalabku haysto in muddo ah iyo hagaajinta dhinacyada qaarkood.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo dejiyo jawaabo deg deg ah barta Instagram
Lenovo K12 iyo Lenovo K12 Pro waa laba taleefon oo dhex dhexaad ah oo cusub oo wata Android 10